Lalao Tetra aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Tetra an-tserasera
Ny boaty ny sôkôlà
Mifangaro World: Weekend
Ranomasina Bubble Shooter
Lalao Online Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Puzzle Tetris Manan-tsaina On care Efijery kasihina Html5
Eo anoloantsika dia vaovao lalao mahafinaritra Tetra Softgames fantatra orinasa, izay manokana amin'ny famokarana ny lalao ho fitaovana touchscreen. Isika rehetra hahatsiaro ny izao tontolo izao Tetris lalao malaza. Izany no iray amin'ireo lalao voalohany izay indray mandeha mivoaka any amin'ny tontolo izao, ka dia tamin'izany andro izany efa nandresy malaza be. Ny lalao Tetra mpanoratra niezaka ny hampiray sy hampihavana ireo rehetra fivoaran'ny toe-draharaha izay efa nisy tao amin'ny lalao lany eo ambany elo ity. Noho izany, isika teo amin'ny efijery dia ny mitendry saha izay ho latsaka an-tampon'ny isan-karazany ny endriky voafaritra. Mandosira, mandra- zavatra ny tsy nanendrenay ny sisiny ambany, dia afaka hanova ny bika aman'endriny, na mifindra ankavanana na ho amin'ny ankavia. Rehefa mahatsiaro ny asa dia ny hametraka ny sekely ka dia endrika iray tsy misy tsipika banga. Rehefa manao izany ianao, dia handoro ny tsipika ary mahazo ny sasany habetsahan'ny hevitra. Raha tsy mitandrina ianao sy hihaino, ary ny zavatra natao an-tampon- milalao an-tsaha dia ho very. Fitantanana ny hetsika rehetra ao amin'ny ny lalao amin'ny alalan'ny fampiasana ny totozy. Game Tetra lasa HTML5 amin'ny fampiasana ny teknolojia, dia manana sary tsara tarehy sy mahaliana feo. Izany rehetra izany miaraka mamorona mahaliana rivo-piainana ao amin'ny lalao, izay hahaliana ny mpilalao misy taona. Koa misintona izany haingana ny fitaovana, ary hanomboka ny lalao. Raha tianao, Tetra lalao azo nilalao ihany ny Internet. Mba hanaovana izany, na dia tsy tokony handeha hamaky ny fisoratana anarana.